Anyị mmiri mmiri silicone roba ịkpụzi usoro na-arụpụta omenala prototypes na ọgwụgwụ na-eji mmepụta akụkụ na 15 ụbọchị ma ọ bụ obere. Anyị na-eji ebu aluminom nke na-enye ngwa ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma ma mepụta usoro nrụpụta ngwa ngwa, ma na-echekwa akara mmụta dị iche iche na durometers nke ihe LSR.
Olee Liquid Silicone Rubber Nkedo Work?
LSR ịkpụzi dị iche iche ntakịrị site na nrụpụta ọgwụ thermoplastic n'ihi mgbanwe ya. Dị ka ihe eji arụ ọrụ aluminom, ọkọlọtọ LSR na-akpụzi site na iji CNC machining iji mepụta ngwa ọkụ dị elu wuru iji guzogide usoro ịkpụzi LSR. Mgbe igwe na-egwe ọka, a na-eji aka ya ejiri aka na-egbu maramara nke ndị ahịa, nke na-enye ohere nhọrọ isii dị elu iji mechaa.
Site n'ebe ahụ, a rụchara ngwa ọrụ gwụgoro na mpempe akwụkwọ nkenke LSR dị elu nke nwere nkenke ahaziri maka njikwa nke oke nha iji mepụta akụkụ LSR kachasị agbanwe agbanwe. Na Protolabs, a na-eji aka wepụ akụkụ LSR site na ebu ahụ, dịka ntụtụ injector nwere ike imetụta akụkụ dị mma.
Ihe LSR gụnyere silicones ọkọlọtọ na akara ule dị iche iche iji dabaa ngwa ngwa dị iche iche na ụlọ ọrụ dịka ahụike, akụrụngwa, na ọkụ. Ebe ọ bụ na LSR bụ polymer na-eme ka ihe kpụ ọkụ n’ọnụ, ọnọdụ ya a kpụrụ akpụ na-adịru mgbe ebighị ebi — ozugbo e debere ya, ọ gaghị agbaze ọzọ dị ka thermoplastic. Mgbe ọsọ ahụ zuru, akụkụ (ma ọ bụ nke mbụ na-agba ọsọ) na-akụ ma ziga obere oge mgbe nke ahụ gasịrị.